सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्यो : सिंह - समाचार - कान्तिपुर समाचार
सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्यो : सिंह
माघ २५, २०७६ रासस
चितवन — कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले सरकारले राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएका छन् । चितवनमा शनिबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै सिंहले सरकारले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र जग्गाधनी पूर्जा भएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर फाइल अगाडि बढाउनेलाई मुद्दा दायर गरेको बताए ।
उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को सर्वोच्च कमान्डर प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यहाँबाट हुने कुनै पनि निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउन खोजिएको छ ।’
सिंहले अख्तियार सरकारबाट प्रभावित भएर जग्गा हुनेलाई कारवाही गर्न डराएको बताए । तत्कालीन मन्त्री, प्रधानमन्त्री र जग्गाधनी पनि त्यतीकै दोषी भएकाले उनीहरुलाई पनि कारवाही हुनुपर्ने माग सिंहले बताए ।
सिंहले यसैका लागि काँग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेको स्पष्ट पार्दै अख्तियारले राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रह विना नै स्वतन्त्र रुपमा छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रकाशित : माघ २५, २०७६ १४:४०
'नेपाल फर्केर के पाइन्छ ?'
काठमाडौँ — 'फर्केर के पाइन्छ ? वा नेपाल फर्केर मैले के गर्न सक्छु ?', विदेशमा रहेका धेरै नेपालीले बारम्बार सोध्ने यही प्रश्‍नबारे कान्तिपुर कनक्लेभको दोस्रो दिनको 'कनेक्टिङ ग्‍लोबल नेपालिज' सत्रमा चर्चा भयो ।
यो चर्चामा थिए भारतीय मूलका नेपाली लेखक प्रज्ज्वल पराजुली, मिस नेपाल २०१९ अनुष्का श्रेष्ठ र मल्टिनेसनल कम्पनी ग्रोथ फर नलेज(जीएफके) का सागर तामाङ । सत्रलाई सहजीकरण गरेकी थिइन् । क्याटालिस्ट टेक्‍नोलोजीकी सीईओ प्रतिभा पाण्डेयले ।
पूर्व मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठले दिनानुदिन विदेश जानेको संख्या बढिरहेको अवस्थामा नेपाली डायस्पोरालाई एउटै डोरीमा बाँध्‍नुको विकल्प नभएको बताइन् । उनले आफू मिस वर्ल्डमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुँदा विश्‍वका विभिन्‍न ठाउँमा छरिएर रहेका नेपालीहरुको ठूलो समर्थन पाएको बताइन् । त्यतिबेला मात्र उनले राष्ट्रिय पहिचानको महत्व बुझेको उल्लेख गरिन् ।
त्यस्तै गुर्खाज डटर र द ल्याण्ड ह्‍वेर आई फ्ली जस्ता नेपाली डायस्पोराका बारेमा पुस्तक लेखेका प्रज्ज्‍वल पराजुलीले विश्‍वका जुनसुकै देशमा रहे पनि नेपालीहरु एकताबद्ध रहेको बताए । तर पनि विभिन्‍न देशमा रहेका नेपालीले एक अर्काका बारेमा धेरै बुझ्‍न र थाहा पाउन बाँकी रहेको पराजुलीले बताए । विभिन्‍न गल्ती गर्ने र पहाडी बुद्धि र गोर्खे बुद्धि भन्‍ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए ।
त्यस्तै जीएफकेका सागर तामाङले जीवन भनेको चुनौतीहरुलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । नयाँ गन्तव्यमा पुग्‍नका लागि कम्फोर्ट जोनभन्दा बाहिर आएर आफूले गर्न चाहेको काम गर्न उनले युवा पुस्तालाई आग्रह गरे । विश्‍व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौतीहरुको सामना गर्नै पर्ने उनले बताए । अध्ययनमा मात्रै सीमित नगरेर अनुभव बटुल्दै विश्‍वबजारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न पनि उनले युवा पुस्तालाई आग्रह गरे । नेपाललाई विश्‍व बजारमा चिनाउने उत्पादनको आवश्‍यकता रहेको पनि उनले चर्चा गरे ।
क्याटालिस्ट टेक्‍नोलोजीकी सीईओ प्रतिभा पाण्डेयले विश्‍वव्यापीकरणका कारण एक ठाउँमा बस्‍न नसक्‍ने अवस्था भए पनि एक अर्कासँग जोडिएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
त्यस्तै पूर्व मिस नेपाल अनुष्काले विश्‍वका विभिन्‍न ठाउँमा व्यवसाय चलाइरहेको र आफूले उनीहरुसँग सहकार्य गरिरहेको बताइन् ।
यस सत्रका वक्ताहरुले विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरु नेपाल फर्केर के गर्न सकिन्छ र भन्‍ने सोचमा रहेको चर्चा गरे । कतिपयले रिटायर्ड भएपछि नेपाल जाने हो भन्‍ने गरेको पनि उनीहरुले बताए । विश्‍वका जुनसुकै कुनामा भए सहकार्य गर्न सके नेपालले विभिन्‍न क्षेत्रमा फड्को मार्नेमा सबै वक्ताको एकमत थियो ।
शुक्रबारबाट सुरु भएको कान्तिपुर कनक्लेभको दोस्रो संस्करण शनिबार सकिँदैछ । कनक्लेभमा आजै 'नेपालमा मिटु अभियान किन अघि बढेन' भन्ने विषयमा नेतृ मानुषी यमि भट्टराई, नाट्यकर्मी आकांक्षा कार्की तथा अधिवक्ता दुर्गा कार्कीले छलफल गर्दैछन्। राजनीतिक र स्वतन्त्रताको सवालमा नेपाल अघि बढिरहेको छ कि पछि जान लागेको छ भन्ने विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कांग्रेस नेता गगन थापा तथा मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीबीच छलफल हुनेछ।
'बदलिँदो भू-राजनीतिमा नेपाल' शीर्षकमा समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र, भारतीय प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा र पूर्वराजदूत महेश मास्केबीच छलफल हुनेछ।
साँझको अन्तिम सत्रमा भने कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्माले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग परिसंवाद गर्नेछन्।
कनक्लेभको इकान्तिपुरले फेसबुक र युट्युबमार्फत् प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ।
प्रकाशित : माघ २५, २०७६ १४:३८